Nceda ! - I-Airbnb
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguDavor
Ifulethi leStudio libekwe malunga ne-10-15min ngetram ukusuka kumbindi wesixeko kunye nesikwere esikhulu. Iquka ikhitshi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlala eline-balcony.
I-Flat ijolise kwintendelezo ezolileyo yesakhiwo. Indawo yokumisa itram ikumgama nje oyi-50 m ukusuka kwindlu.
Yindlu encinci ye studio elungele abantu aba-2. Inegumbi lokuhlala elinebhedi ephindwe kabini kunye nebalcony, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokuhlambela. Ifulethi lonke lijolise kwintendelezo ezolileyo, eya kuqinisekisa ukuba uhlala ngoxolo.
Kukwakho iTV kunye ne-Intanethi ye-WIFI yasimahla.
Indawo yokumisa itram ikwimitha nje engama-50 ukusuka kwisakhiwo. Kufuphi ungafumana iivenkile ezininzi, iivenkile zokubhaka, iivenkile zepastry, ipaki iStara Trešnjevka kunye nemarike eluhlaza ebumelwaneni, iDom sportova, iofisi yakwaNokia . Ukuba uyabuthanda ubomi basebusuku kwaye uhlala kude kube sebusuku ungabuyela lula kwiflethi kuba yonke imigca yetram idlula ecaleni kwesakhiwo seflethi ekupheleni kweshifti yabo.
Umbuki zindwendwe ngu- Davor
Sinika iindwendwe zethu yonke imfihlo eziyifunayo. Asikho eflethini okanye kwisakhiwo sokuhlala. Ke-emva kokungena kwiindwendwe zinemfihlo zabo kodwa ukuba ziyakufuna into zinokusiqhagamshela nangaliphi na ixesha.